Tun Tun's Photo Diary: Batam, Indonesia (2 Days 1 Night) #1
Indonesia က ၂၀၁၁ လောက်မှာ မြန်မာနိုင်ငံကို ဗီဇာ ကင်းလွတ်ခွင့် ပေးခဲ့ပါတယ်။ အဲ့ဒီကတည်းက မြန်မာတွေ တော်တော်များများ Indonesia ကို သွားလည်ကြပါတယ်။ အသွားများတဲ့ နေရာတွေကတော့ Bali, Batam, Bintan စတဲ့ ကျွန်းတွေကိုပါ။ Batam နဲ. Bintan ကတော့ စင်ကာပူနဲ. အ၇မ်းကိုနီးပါတယ်။ သဘောင်္စီးသွား၇င် မိနစ် ၅၀ လောက်ပဲကြာပါတယ်။ Bali ကတော့ လေယာဉ်နဲ.သွားရပါတယ်။ သိပ်အဝေးကြီး လဲ မသွားချင်ဘူး ၊ ၁ရက် ၂ရက်လောက်ပဲ ခရီးသွားချင်တဲ့သူဆိုရင်တော့ Batam နဲ. Bintan ကျွန်းကို သွားကြတာများပါတယ်။ Bintan ကိုလဲ ကျွန်တော် ရောက်ဖူးပါတယ်။
Some time on 2011, Indonesia eased visa requirement to Myanmar citizens. After the change,alot of Myanmar who live in Singapore like to visit Indonesia for holiday. Most popular destinations are Bali, Batam & Bintan. Batam and Bintan are quite close to Singapore about 50 minutes journey by boat. For Bali, you need to takeaflight. So Batam and Bintan are suitable for people who just want to go out from Singapore for 1 or2days trip. I have also been to Bintan some time in 2012.
ဒီ2days 1 night trip ကိုလဲ Groupon Deal ကနေ ၀ယ်ထားတာပါ။ တစ်ယောက်ကို S$60 ကျော်ကျော် ကျပါတယ်။ တခြား Deal တွေနဲ. ယှဉ်ရင် တော်တော်လေး ဈေးပေါပါတယ်။ S$90 ကျော် တန် Deal တွေ လဲ ရှိပါတယ်။ အဲဒါ တွေကတော့ Hotel ကောင်းတာတွေပေါ့။ အခါကြီး ရက်ကြီး နေ.တွေ သွားရင် အပိုိထပ်ဆောင်းပေးရပါတယ်။ ကျွန်တော်က 01-Jan သွားတာဆိုတော့ New Year ပြီးသွားပြီ ဆိုတော့ အပိုငွေ ထပ်မပေးရပါဘူး။ ၁ ရက်နေ. မနက်သွား၊ ၂ ၇က်နေ. နေ.လည်ပြန်။
I bought this Batam2days 1 night trip from Groupon Deal. Each person cost S$60++. Compared to other deal, it was quite cheap. There were some other deals which cost more than S$90 due to better accommodation and facilities. For the travel deal, you need to pay additional money if you want to travel during the peak period like school holiday or public holiday. I chose to go on 01-Jan-2012 which is holiday but not in the peak period which they mentioned on the Term & condition. Thus, I didn't have to pay additional money.
သဘောင်္က မနက် ၈နာ၇ီ လောက်ထွက်မှာဆိုတော့ Harbour front center ကို မနက် ၆နာ၇ီ ခွဲလောက် အရောက်သွားရပါတယ်။ ရထားနဲ.သွားရင် မမှီမှာ ဆိုးလို. Taxi စီးပြီးသွားပါတယ်။ လမ်း ပေါ်မှာ လူတွေ မနေ.ညက အကဲလွန် ပြီး လမ်းပေါ်မှာ မှောက်ပြီး အိပ်နေကြတဲ့သူတွေ အများကြီးတွေ.ခဲ့ပါတယ်။ံHarbour front center က Batam fast (ferry company office) မှာ သဘောင်္စီးဖို. လက်မှတ်အရင်ဆုံးထုတ်ရပါတယ်။ အဲ့မှာ Deal ရဲ. Term & Condition အရ တစ်ယောက်ကို S$20 ကျော်လောက် ထပ်ပေးရပါတယ်။ ကိုယ်တိုင်လဲ ဖတ်ထားလို.သိနေပါတယ်။ အဲဒီတော့ ဒီ Deal က စုစုပေါင်း S$60++ & S$20++ ဆိုတော့ S$90 လောက်ဖြစ်သွားတာပေါ့။ ဘာပဲ ဖြစ်ဖြစ် ဈေးမဆိုးဘူးလို.ထင်ပါတယ်။ အခုလို online ပေါ်က Deal တွေ ၀ယ်တဲ့ အခါ မှာ ငွေမချေခင် Term & Condition ကို သေချာဖတ်ဖို. အကြံပေးချင်ပါတယ်။
Our ferry would depart from Harbour front center about 8am so I had to be there about 6:30am. I took taxi to go there as I worry if I might not make it if I took Train. On my way, I sawalot of New Year Night Party goers sleeping on the roadside. Upon arrival at Harbour front center, I need to go the Batam Fast (ferry company office) to get the ferry ticket. As per Term & Condition, I need to pay S$20++ to get ferry ticket. I know this extra charge before I purchase this deal. With that S$20++ & S$60++ the total cost about the trip became S$90 which is still not very bad for this kind of trip. My advice for those who would to buy Travel deal is to read Term & Condition before the payment.
လေယာဉ်စီးသလိုပါပဲ Immigration ကို ဖြတ်ပြီး Harbour front ဆိပ်ကမ်းကနေ သဘောင်္စထွက်လာပါပြီ။ သဘောင်္က သိပ်အကြီးကြီး မဟုတ်ပါဘူး။ ထိုင်ခုံ နံပါတ်လဲ မရှိပါဘူး။ ကြိုက်သလို ထိုင်လို.ရပါတယ်။ သဘောင်္အတွင်းပိုင်းက အအေးခန်းထဲမှာ လဲ ထိုင်လို.ရသလို၊ အပြင်မှာလဲ ထိုင်လို.ရပါတယ်။ ကျွန်တော်က ရူခင်း ကြည့်ချင်လို. အပြင်မှာ ထွက်ထိုင်ပါတယ်။ မိုးအုံ. တဲ့ နေ. တနေ.ဆိုတော့ ဓါတ်ပုံတွေ က မှောင်မှောင် မဲမဲတွေ များတယ်။
The ferry to Batam is not very big. You can sit anywhere you want, there is no seat number. Some sit inside the air-condition room but I prefer sitting at the balcony so that I can take more photos. Unfortunately, the weather was very cloudy on that day.
Song of the Sea (Sentosa)
မိနစ် ၅၀လောက် သဘောင်္စီးပြီးတော့ Batam ကျွန်းဘက်ကို ရောက်လာပါပြီ။ SEKUPANG Ferry Terminal မှာ သဘောင်္ရပ်ပါတယ်။ Indonesia immigration ဖြတ်ပြီး တာနဲ. လာကြိုမယ့် Tour Bus နဲ. လိုက်သွားရုံပါပဲ။
After taking about 50 minutes, we arrived SEKUPANG Ferry terminal where we need to go through immigration check. Then, we just need to follow where our Tour Bus bring from this point.
Tour Bus ပေါ်ေ၇ာက်နေပါပြီ။ ကားပေါ်မှာ Tour Guide ကောင်လေး တစ်ယောက်ပါပါတယ်။ စင်ကာပူ ကလာတာ တရုတ်တွေ များတော့ Guide က တရုတ်လိုပဲ ပြောပါတယ်။ English လိုလဲ နည်းနည်းပါးပါးတော့ ပြောပါတယ်။
As most of the people in our Tour bus were Chinese, the tour guide spoke Chinese most of the time. He did speak English occasionally.
အရင်ဆုံး တရုတ် သက်သက်လွတ် ဘုရားကျောင်းကို လိုက်ပို.ပါတယ်။ ကားပေါ်က အသက်ကြီးပိုင်း အန်တီကြီးတွေ ကတော့ သဘောကျမယ် ထင်ပါတယ်။ ကိုယ့်အနေနဲ.ကတော့ သိပ်ပြီး စိတ်မ၀င်စား လှဘူး။ ဘုရားကျောင်းမှာ နာရီဝယ်လောက် အချိန်ပေးပါတယ်။ တချို.လဲ သက်သက်လွတ် ဆိုင်မှာ မနက်စာ စားကြပါတယ်။ ရောက်တုန်းရောက်ခိုက် ဘုရားကျောင်း ထဲ ဓါတ်ပုံ တချို. ရိုက်ခဲ့ပါတယ်။
First stop, Chinese temple, other people especially elderly might like this place. For me, there were nothing much to explore and take photo. We spent about 30 minutes in this place, some of them had their breakfast at vegetarian food stall.
ဘုရားကျောင်းပြီးတော့ နောက်သွားမည့် နေရာက Layer Cake လုပ်တဲ့ နေရာပါ။ Layer cake ဆိုတာက Batam ရဲ. နာမည်ကြီး လက်ဆောင် မုန်. တမျိုးပါ။ ဥပမာ မန္တလေး ထိုးမုန်.လိုမျိုးပေါ့။ ကိတ်မုန်. ကို အထပ်အထပ်လိုက် လုပ်ထားလို. Layer Cake လို.ခေါ်တာပါ။ စင်ကာပူက လူတွေ ကတော့ အဲ့ဒီ cake ကို crazy ဖြစ်ကျတဲ့ ပုံပေါက်တယ်။ တော်တော်များများ ၀ယ်ကြတယ်။ အခု အော်ဒါမှာ ငွေချေပြီးရင် ညနေကျရင် ကျွန်တော်တို. Tour Busေ၇ာက်နေတဲ့ နေရာကို လာပို.ပေးတယ်လို. သိရပါတယ်။ စင်ကာပူမှာလဲ အဲဒီ မုန်.ကို ၀ယ်လို.ရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် တခြား နိုင်ငံကဟာကိုမှ အကောင်းထင်တဲ့ စလုံးတွေကတော့ အားရပါးရကို ၀ယ်ကြပါတယ်။ Layer cake ကို အ၇င်ကလည်း စားဖူး ထားတော့ သိပ်ပြီး စိတ်မ၀င်စားလှဘူး။ ဓါတ်ပုံတောင် မရိုက်ခဲ့ဘူး။ ဆိုင်က ပေးတဲ့ အမြည်းတော့ နည်းနည်းစားလိုက်တယ်။ ဘာမှ တော့ မ၀ယ်ခဲ့ဘူး။ :)
Second stop, Layer cake bakery. It is something like Butter cake makes by one layer over another. To my surprise,alot of tourists from Singapore like to buy it even thought it is highly available in Singapore. You can make order now and later when the cakes are ready, they will contact the bus driver and send to wherever we are. I just tastedafew sample but didn't buy any. :)
ကိုယ်က ကိတ်မုန်. မ၀ယ်တော့ ဆိုင်နား တ၀ိုက်လျှောက်ကြည့်ပါတယ်။ New Year ရုံးပိတ်ရက်ဆိုတော့ ဆိုင်တွေ တော်တော်များများ ပိတ် ပြီး လမ်းပေါ်မှာ လူတွေ ရှင်းနေပါတယ်။
It was on 01-Jan-2013, public holiday so most of the office were closed and the streets were also low traffic.
Street Handbag stall
လမ်းဘေးမှာ ရောင်းတဲ့ ပိုက်ဆံအိတ် ဆိုင်နဲ. အကြော်စုံဆိုင်။
မြင်းခွါရွက် အပင်နဲ.တူတယ်။ ဒီကလူတွေ စားလုို.၇မှန်းသိရဲ.လား မသိဘူး။ ဒါမှမဟုတ် အလှပဲ စိုက်ထားတာလား?
Layer Cake ဆိုင်က အပြန်မှာ ထပ်ပို.တဲ့နေရာက Polo အကျီင်္ဆိုင်ပါ။ Batam မှာ ချူပ်တာဆိုတော့ ဈေးများပေါမလားလို.၊ ဈေးကြီးတာက ကြီးတာပါပဲ။ စင်ကာပူက ဈေးနဲ.ယှဉ်ရင်တော့ ပေါချင် ပေါမှာပေါ့လေ။ ဒါပေမယ့် စိတ်မ၀င်စားလို. ဘာမှ မ၀ယ်ခဲ့ပါဘူး။
Third stop, Polo shop, these shirts are made in Batam. However, the price is not very cheap. It might be slightly cheaper compared to Singapore but I didn't feel like buying shirt here.
Polo ဆိုင်က အပြန်မှာတော့ နေ.လည်စာစားမည့် နေရာကို လိုက်ပို.ပေးပါတယ်။ နေ.လည်စာ စားဖို. စောနေသေးတာနဲ. စားသောက်ဆိုင်နားက လက်ဆောင်ပစ္စည်းဆိုင်ကို ခဏ၀င်ကြည့်ပါတယ်။ ပြီးတော့ တီးလုံးသံ ကြားတာနဲ. တီးလုံးသံနောက် လိုက်သွားလိုက်တာ၊ အခုလို ရိုးရာ အက တွေ ကနေတာ တွေ.ရပါတယ်။ ကျွန်တော်ရောက်မလာခင်က အုန်းသီးကို လက်နဲ.ခွဲတာတို.၊ ဖန်ပုလင်း ကို ပါးစပ်နဲ. ကိုက်ပြီး ခွဲတာတို. လုပ်သွားတယ်လို. သိရပါတယ်။
Fourth stop, Seafood restaurant. We arrived here quite early so our guide advised us to go around and explore the neighborhood such as souvenir shop and cultural performance.
မီးကွင်းထဲ ခုန်တဲ့ ပုံလေး အခုလို ရိုက်နိုင်ခဲ့လို. တော်တော်လေး ကျေနပ်မိတယ်။ ဒီခရီးစဉ်တခုလုံးရဲ. အကောင်းဆုံး ပုံ ပြောမယ် ဆိုရင်လဲ မမှားပါဘူး။
This man jumping through the fire ring is the best photo I took for this trip.
နေ.လည်စာ ကို အခုလို ကျွေးပါတယ်။ စားပွဲမှာ မသိတဲ့သူတွေနဲ. အတူတူထိုင်ရလို. အားနာတာနဲ. ဟင်းခွက်တွေကို ဓါတ်ပုံမရိုက်ခဲ့ရဘူး။ ကျွေးတာက Seafood ဟင်းတွေနဲ. ဟင်းရွက်ကြော်တွေပါ။ ဗိုက်ဆာနေလို. တော်တော်လေး စားလို.ကောင်းပါတယ်။ Chilli Crab လဲပါပါတယ်။ ဒီနေ.လည်စာ က Tour package ထဲမှာ ပါပြီးသားပါ။ ပိုက်ဆံ မပေးရပါဘူး။ စားသောက်ဆိုင်ဘေးမှာ ငါး၊ ပုဇွန်၊ ကမာ၊ ခရု၊ ဂဏန်းတွေ မွေးထားတဲ့ ကန်တွေ ရှိပါတယ်။
We had our lunch in this place. The table is huge and we had to share with other people. That's why I didn't take any photos of the foods like I always do. They servedafew seafood and fried vegetables. One of the highlight dish was Chilli Crab. This lunch was provided by our tour package (no additional charges). Beside restaurant, they also have seafood farming.
နေ.လည်စာ စားပြီး နောက်ထပ် ဘယ်နေရာ ထပ်သွားသလဲ ဆိုတာ Part2မှာ စောင့်ဖတ်ကြပါဦး။ :)
at 8/03/2014 12:40:00 AM
Layer cake က စင်ကာပူနဲ့ယှဉ်ရင် တော်တော် ဈေးသက်သာလို့ပါ
Tun Tun August 3, 2014 at 1:22 AM
Oh Really? Thank for your info. :)
အဲဒီ Polo outlet ဆိုင်မှာ ရောင်းနေတာတွေက အညံ့စား မဟုတ်ရင်၊ အတုနဲ့ တူတယ်..